android ဖုန်းများအတွက် Skype ကို APK ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Skype ကို
Skype ကို APK ကို
Skype ကိုပြောနေတာဟာကမ္ဘာ့စောင့်ရှောက်။ နေပါစေသူတို့အပေါ် Skype ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်အဘယ်အရာကိုကိရိယာအခမဲ့« hello "တစ်ချက်ချင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုအသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ရှိသမျှနှင့်အတူပြောကြပါတယ်။ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ရန်• Talk ကိုမျက်နှာ။
•နယူးအုပ်စုတစ်စုကဗီဒီယို 25 လူတွေမှတက်နှင့်အတူတောင်းဆိုထားသည်။
•အခမဲ့အသံဖြင့် Skype ကိုအပေါ်အခြားမည်သူမဆိုရန်တောင်းဆိုထားသည်။ အုပ်စုတစုခေါ်ဆိုခအပေါ်လူတွေ 25 အထိထည့်ပါ။
•အနေနဲ့ချက်ချင်းအတွက်ကို Message သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို chat ဖို့လူ 300 အထိထည့်ပါ။
• (ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအမြဲအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း Skype ကိုမှ Skype ကို) အနိမ့်မှုနှုန်းမှာမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်ကုန်းမြေနယ်နိမိတ်ဖုန်းဆက်ပါ။
•ဝေမျှမယ်ဓါတ်ပုံ, ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျများ, သင့်တည်နေရာနှင့်သင့်ချက်တင်မှရုပ်ပြောင်များနှင့် Mojis ထည့်ပါ။
• Skype ၏ရရှိနိုင်စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, PC များနှင့် Macs ပေါ်မှာ။ အခုတော့မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုမှချိတ်ဆက်နေဖို့ပင်ပိုမိုလွယ်ကူမယ့် - ။ နေပါစေသူတို့ပေါ်မှာဆိုရင် device ကို * အော်ပရေတာဒေတာစွဲချက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့န့်အသတ်ဒေတာအစီအစဉ်သို့မဟုတ် Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုကို အသုံးပြု. အကြံပြုပါသည်။
ဒီလွှတ်ပေးရန်အတွက်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အ Skype ကိုပိုကောင်းစေယေဘုယျတိုးတက်မှုများနှင့်အင်္ဂါရပ် updates များကိုတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းပေးထားတယ်။
"တုံ့ပြန်ချက် Send" ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင့်စိတ်ကူးများနှင့်မှတ်ချက်များကိုဝေမျှဖို့ဆက်လက်လေ့လာပါ။ ကျနော်တို့နားထောင်နေ!
Skype ကို - အခမဲ့ထားတဲ့ IM & ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု
35.80 ကို MB
7 Skype ကို Cool ...
Google က Duo ဗီဒီယို ...
Meshageria Bezabih says:
စက်တင်ဘာလ 17, 2018 မှာ 8: 12 ညနေ
android ဖုန်းများအတွက် dowload apps များမှအံ့သြဖွယ် site ကို
ဇူလိုင်လ 13, 2017 မှာ 4: 37 ညနေ
ကြောက်မက်ဘွယ်ကြိမ်မြောက် essily ဒီ app ကိုသုံးပြီး
ဇွန်လ 27, 2017 မှာ 9: 02 ညနေ
ဧပြီလ 23, 2017 မှာ 10: 07 နံနက်
ဧပြီလ 14, 2016 မှာ 12: 16 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2016 မှာ 8: 14 နံနက်
Shiela Sonon says:
ဇူလိုင်လ 18, 2016 မှာ 4: 46 ညနေ
က Wi-Fi ကိုမပါဘဲအသုံးပြုမှုဖြစ်နိုင်သလား
Shilling Nobel says:
နိုဝင်ဘာလ 20, 2019 မှာ 7: 51 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 19, 2015 မှာ 5: 46 ညနေ
သြဂုတ်လ 1, 2015 မှာ 4: 20 နံနက်
ဤသည်ကိုကြော်ငြာနှင့်အတူကျပ်သောဗားရှင်း 4.9 ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရှောင်ရှား။
Shawaz Khan က says:
ဇွန်လ 29, 2015 မှာ 3: 19 နံနက်
အလွန်ကောင်းတဲ့ app ကို
ဇွန်လ 22, 2015 မှာ 7: 07 ညနေ
mirza shaariq says:
ဇွန်လ 13, 2015 မှာ 6: 19 ညနေ
ငါဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါပွီပေမယ့်ပြီးပြည့်စုံကို download ပြီး '' file ကိုဖွင့်လှစ်မနိုင် '' ဟုဆိုသည်။ အခုတော့ဘာလုပ်ရမှန်း ?? ငါ့ကိုအကြောင်းပြန်ပါ။
Shakeel အဟ်မဒ် says:
မေလ 23, 2015 မှာ 5: 23 ညနေ
မေလ 8, 2015 မှာ 8: 32 ညနေ
ကျွန်မအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့်ဒေါင်းလုဒ်ပြီးဆုံးခဲ့ပေ။ ငါပြဿနာကဘာလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ဦးကကူညီကျေးဇူးပြုပြီး
Alvee Ching says:
ဧပြီလ 9, 2015 မှာ 8: 48 ညနေ
ပွဲတော်မင်္ဂ App ကို
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 11, 2015 မှာ 11: 42 နံနက်
ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအတွက် NIC app ကိုကောင်းသောမြန်နှုန်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2015 မှာ 11: 42 နံနက်
Skype ကိုများအတွက် V ကို Nice Apk
ဇန်နဝါရီလ 23, 2015 မှာ 11: 58 နံနက်
ဇန်နဝါရီလ 20, 2015 မှာ 12: 04 ညနေ
Excellent က app ကို
ဇန်နဝါရီလ 5, 2015 မှာ 6: 59 ညနေ
ဒါဟာ Excellent က Android App များရဲ့ site ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2014 မှာ 3: 46 ညနေ
apk ကိုဝေမျှဘို့ THX တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဒါလွယ်ကူပါတယ်
နိုဝင်ဘာလ 22, 2014 မှာ 2: 00 ညနေ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2015 မှာ 1: 38 နံနက်
ဘယ်လို Skype ကို app ကိုငါ့အ android 4.2.2 အပေါ်ကျေးဇူးပြုပြီးဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ J6 စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်း play စတိုးရှိသည်မဟုတ်သနည်း?
zakir azam khan says:
နိုဝင်ဘာလ 21, 2014 မှာ 8: 14 နံနက်
နိုဝင်ဘာလ 3, 2014 မှာ 11: 48 နံနက်
ငါ Skype ကိုကွန်ယက်ပူးတွဲများအတွက်အလွန်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်ကြောင်းကို
နိုဝင်ဘာလ 26, 2014 မှာ 9: 35 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 24, 2014 မှာ 11: 48 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 24, 2014 မှာ 11: 45 ညနေ
Kush တောင်တန်းတွေနဲ says:
အောက်တိုဘာလ 24, 2014 မှာ 8: 27 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 19, 2014 မှာ 12: 02 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 18, 2014 မှာ 6: 59 ညနေ
istill ယခုဈ skype မသုံးကြဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ကြောင့်ငါကအရမ်းဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လမ်းကိုရ tuday
အောက်တိုဘာလ 18, 2014 မှာ 7: 34 ညနေ
ငါ့ဖုန်းကိုတစုံတခုကနေ reciev မနေပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့အပြဿနာလည်းဖြစ်ပါတယ်ငါသည်ငါ့ဖုန်းပေါ်မှာ skype ကဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်သင်ငါသည်သင်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုငါကြားအဖြစ်အလွန်အကောင်းဆုံးနှင့်အသုံးဝင်သည်ငါမူကားဘယ်လောက်ငါ့ကိုကူညီကျေးဇူးပြုပြီးမသိရပါဘူးဆိုလိုနားလည်လုပ်ခဲ့တယ်ပေမယ် သငျသညျအကြှနျုပျအပျေါငါ့ထံမှဒေါင်းလုတ်လုပ်လိုချင်တာတွေငါ့ကိုမေးသော်
Raja Hayat says:
အောက်တိုဘာလ 17, 2014 မှာ 5: 25 နံနက်
Swati အဘိဓါန် Srivastava says:
အောက်တိုဘာလ 16, 2014 မှာ 4: 10 နံနက်
အစဉ်မပြတ်ငါကဒီမှာ apps များ download လုပ်ပါငါ့မိတ်ဆွေတွေကိုအကြံပြုအစားကစား store..i ၏ဤနေရာတွင် apps များ download လုပ်ပါလို ..
u "AppsAPK" thanx ... ဒါကြောင့်ပြဿနာတစုံတရာမရှိဘဲ apps များ download လုပ်ပါရန်အလွန်လွယ်ကူသည် .. ဘုရားသခငျသညျဦးကဒီထိရောက်သော site ကိုဖွံ့ဖြိုးသောသူအပေါင်းတို့ကိုကောင်းကြီးပေး :)